Is bedelada Muqdisho ka dhacaya oo Cilmi baaris lagu soo bandhigay (Daawo Video)
Mogadishu Isniin 2 April 2012 SMC
Iyadoo bilihii la soo dhaafay is bedelo la taaban karo oo dhinacyo badan oo ku aadan horumarka bulshada laga dareemayay Magaalada Muqdisho ayaa markii u horeysay cilmi baaris la sameeyay lagu soo bandhigay Is bedelada jira.
Xarunta Cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD ayaa cilmi baaris ay ku sameysay Is bedelada Muqdisho ku ogaatay, arrimo badan oo sare u qaaday horumarka adeega bulshada, waxaana cilmi baaristan lagu qeexay in magaalada inteeda badan ay dhismeyso, Ganacsiyo badana ku soo kordhayaan, dadweynaha ay u heelan yihiin nabada, maadaama 20-sano ay wax badan kaga lumeen.
Is bedelada ayaa wal wal badan ka jira, qaar ka mid ah dadweynaha waxay aaminsan yihiin inuu sii jiri doono, halka qaarka kalena ay sheegayaan inuu kooban yahay, si la mid ah is bedeladii horay Muqdisho u soo maray.
Muuqaalkan Video-ga ayaa si gaar ah u cabiraya horumarada Muqdisho ee is bedelada, sida dhismayaasha ku soo kordhay, ganacsiga, dadkii qurbaha oo dib u soo laabanaya, daliixska Xeebaha, maqaaxi la mid ah kuwa dibadaha iyo Dekeda Muqdisho oo maraakiibta ku soo xirtaan ilaa habeenkii shaqeynaya.
Tiiyo is bedeladaas muuqdaan ayaa hadana duulimaadyada ay noqdeen kuwo ciriiri ah, iyadoo dhowaan la geli doono kuleylaha ayaa hadana dadka dibadaha ku nool bilaabeen inay isa sii diiwaan geliyaan duulimaadyada, si aanu uga buuxsamin, waxaana qeyb ka tahay is bedelka xilligan Caasimada ka jira.
Cilmi baarista lagu sameeyay is bedelada Muqdisho ka jira ayaa waxaa iska kaashaday Hey'adda Cilmi baarista iyo wada tashiga CRD iyo Telefishinka Qaranka SNTV
Daawo Muuqaalada hoos ee ka sheekeynaya is bedelka Caasimada ka jira